नक्सा जारी गर्ने सरकारको आँट - Online Majdoor
जोराल १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:२९
नेपालको नयाँ नक्सा त जारी भयो नि ! गजब !! आश्चर्य !!! तर पङ्क्तिकारलाई यो सत्य विश्वास गर्न केही क्षण गा¥हो भयो । गफ हाँकेरै शासन गरिरहेको दुईतिहाइको सरकारले यति साहस गर्ला भन्ने लागेको थिएन । पूर्व सरकारहरूका सबै विकृति र विसङ्गतिलाई ‘मार्ग दर्शन’ बनाउँदै विरासत धानिरहेको सरकारले एउटा गतिलो र अनिवार्य काम गरेकोमा धन्यवाद ¤
दुईतिहाइको दम्भबाहेक नेपाल र नेपालीको हितमा केही काम गर्ला भन्ने विश्वास नहुनका पछाडि थुप्रै कारण छन् । भर्खरै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कूटनीतिक वार्ता गरी सहमतिमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा परेको छ । भारतले कोराना महामारीका कारण वार्ता पछि गर्ने भनेको थियो । त्यस्तै विगतमा प्रम ओलीले नक्सा त जुनसुकै प्रेसमा छाप्न सकिन्छ भनेका थिए । कागतको नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता लिने भनेर नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरालाई गौण बनाएका थिए । त्यसबेला सबैलाई मोही नदिनेले दही दिन्छु भनेजस्तै लागेको थियो । यस्तो परिदृश्यमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदानहुँदै नयाँ नक्सा जारी हुनु कम आश्चर्यको विषय होइन । त्यसो त लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति–निर्देशन जनतामाझ पुग्दा नपुग्दै झन् कडा बनाएको तथ्यका हामी भुक्तभोगी हौँ । अध्यादेश ल्याएर मसी नसुक्दै फिर्ता लिएको जगजाहेर छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने प्रम ओलीको बोली व्यवहारमा कसरी लागू भइरहेको छ त्यो भनिरहनुपर्ने कुरा होइन ।
नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग समेटिएको आकारले नै देखिन्छ । भारतले नेपालको ७१ ठाउँका ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरिराखेको छ । ती सबै भूमि नयाँ नक्सामा समेटिएको छ कि छैन ? नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल कति भयो ? गएको मंसिरमा सीमा बचाउ अभियानले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको नक्सा र अहिले सरकारले जारी गरेको नक्सा समान छ या फरक छ ? यस्ता जिज्ञासाहरूको छिनोफानो सम्बन्धित विज्ञहरूले गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती विज्ञहरूले जस पाउन होइन आपसमा छलफल गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरुन् किनभने यो व्यक्ति या सरकारको विषय होइन देशको विषय हो ।
भारतले छापिदिएको नक्सा प्रयोग गरिरहेका नेपाली र विश्वले अब नेपालले नै बनाएको र नेपालमै छापिएको नक्सा प्रचलनमा ल्याउन पाइएको छ । पूर्वसरकार र शासकहरू गाली गरेर सिंहदरबारमा ढलीमली गर्ने संस्कृति तोडिएको छ । नयाँ नक्साको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सरकारमा जानु र बस्नुको औचित्य सावित गरेको छ । तर, काम धेरै बाँकी छन् । जुनसुकै प्रेसमा छाप्न सकिने नक्सा जारी गर्दैमा कर्तव्य पूरा हुँदैन । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिने विषय अब ओझेलमा नपर्ने, नपारिने प्रम ओलीको अभिव्यक्ति ३२ दन्तको होस्, छेपारोको रङ्गजस्तो नहोस् !
धेरै काम–कुरामा दुईतिहाइ सरकारको आलोचना र विरोधको बाढीमा नयाँ नक्साको सन्दर्भमा सारा नेपालीले स्याबासी दिएका छन् । हो, नेपालको माना खाएर भारतको गाना गाउने केहीलाई औडाहा छुटेको छ । नेमकिपाका अध्यक्ष का. रोहितले कोरोना भाइरस फैलाउने काम संरा अमेरिकाले गरेको हो कि भनी शङ्का व्यक्त गर्दा जस्तै । त्यस्ता लेण्डुप र विभीषणहरू समयान्तरमा उदाङ्गिँदै जानेछन् ।
अहिले नयाँ नक्सा जारी भएकोमा जस खोज्नेहरूको तँछाडमछाड पनि रोचक देखिएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको नयाँ नक्सा जारी गर्न आग्रह अनुरोध गर्ने, माग गर्ने, विदेशबाट नक्साहरू सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्ने, जनगणना, तिरो तिरेको रसिद, मतदाता सूचीलगायतका प्रामाणिक कागजपत्र जुटाउने र जानकारी दिने सबै जसका हकदार हुन्, धन्यवादका पात्र हुन् । सरकारले ती सबैको मिहिनेतलाई सार्थकता दिने आँट गरेको छ ।
सरकारको आँट या साहसको सन्दर्भमा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा केही जिज्ञासा उठेको छ । प्रम ओलीको राजनीनामाको माग सत्ताधारी दलभित्रै उठेको छ । के त्यो माग घनिभूत हुन थालेको या चलखेल सघनरूपमा हुन थालेकोले एकाएक नयाँ नक्सा जारी गर्ने आँट आएको हो ? त्यसको सङ्केत प्रम स्वयम्को अभिव्यक्तिले दिएको छ । त्यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो । विदेशीले बनाएको होइन अतः सरकार वा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन भन्नुको आशयले त्यतै सङ्केत गरेको छ ।
ठीक छ, नेपाली जनताले बनाएको सरकारले नक्सा जारी गरेजस्तै नेपाल र नेपाली जनतालाई सर्वाेपरि राखेर बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न सकोस्, एमसीसीजस्ता घातक काम नगर्ने सद्बुद्धि आओस्, कुर्सी जीवनपर्यन्तको लागि होइन भन्ने सदा हेक्का रहोस् र देश र जनताको तात्कालीन र दीर्घकालीन हितमा काम गरेर कीर्तिमान राख्ने कार्यमा तन–मन लगाओस् यही आशा गरौँ ।